Nyi Nyi Latt: ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ခေါင်းဖြတ်ဆက်ပြီး လူစားထိုးတဲ့ဆော့ဝဲလ်
ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံကို ခေါင်းဖြတ်ဆက်ပြီး လူစားထိုးတဲ့ဆော့ဝဲလ်
စမ်းပြီးမှ ပေးတာ ဖြတ်ပြီးဆက်ကြည့်တာ ဘဲထီး good ဘဲမ good key က s63+++s3+63
ချောတယ်နော် န ဟန်ဂျီအင်းလေးက....ဖြတ်ဆက်ကြည့်တာ မဆိုးဘူး ကောင်း၏
ဒီဆော့ဝဲရဲ့အသုံးဝင်ပုံကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မှ ပိုသိမယ် ဓာတ်ပုံတွေကို ခေါင်း
ဖြတ်ပြီး တခြားပုံမှာ သွားအစားထိုးတာမျိုး လုပ်ချင်ရင် အဆင်ပြေတဲ့ ဆော့ဝဲကောင်
တစ်ခုပါ ။ ဖြတ်ပြီး ဆက်လို့ လွယ်ပါတယ် ။ တချို့မင်းသမီးတွေ နာမည်ဖျက်ချင်လို့ 
နိုင်ငံခြားက sexy ပုံတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးပြင်ထားတာတွေ တွေ့ နေရတယ်နော ။ ကောင်းတဲ့
ဘက်မှာသုံးရင် ကောင်းပါတယ် သုံးသူရဲ့ စိတ်ကူးပေါ်မှာ မူတည်တာပေါ့ဗျာ ။ အဲ့တော့
၀ါသနာတူရင် ဆွဲ- ပြီးရင် ကဲ ကြည့်..ကဲသာကဲ..(သားသား ပုံတော့ဖြတ်ပြီး မလုပ်ပါနဲ့.)
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - http://www.mediafire.com/? Faceonbody
မူရင်းလင့်မှာ လေ့လာကြည့် - http://avaxhome.ws/software/faceonbody